Nyowani Simba Zvikamu
3D Kudhinda Simbi Zvikamu
Prototyping uye Kugadzira neI-Imba Project Management
Yu Xin Wright inopa huwandu hwese hwekuratidzira uye mabasa ekugadzira. Chikamu chega chega chezviitiko chinozadziswa pasi pemba imwechete. Mainjiniya edu akagadzirira kubatsira nemagadzirirwo, kusarudzwa kwezvinhu, uye ako CAD madhirowa. Dhipatimendi redu rese rekugadzira rakabatana kuitira kutaurirana kuri nani, chengetedzo, uye kugona. Zvisinei nesaizi yeprojekti, mutengi wese ane huremu hwakazara hwemasevhisi edu kumashure kwavo.
Kugara kumusoro kweCCC yekugadzira kugona, isu tinoshandisa iyo-yepamusoro michina yakagadzirirwa neazvino mukutsigira software. Mainjiniya edu anoramba ari kumberi kwemaindasitiri maitiro uye kusimudzira, zvichikonzera mukuenzaniswa kwekugona kwekugadzira. Tichishandisa kwedu kuunganidzwa kwe3-, 4-, uye 5-axis CNC michina isu tinokwanisa kushandira yakawanda yezvikumbiro tichishandisa zviuru zvesimbi, alloys, uye mapurasitiki. Iva nezvakakwana, zvakapedzwa simbi zvikamu mune mashoma se2-5 mazuva.
3D Kudhinda Services
Kudhinda kwe3D ndiko kuvandudzwa kwazvino mukugadzirwa kwechiratidziro. Uchishandisa SLA uye SLS kudhinda, Yu Xin Wright Tech inogona kuburitsa zvirinani, zvidiki, zvinoshanda zvinomiririra dhizaini yako mumaawa 24-48 chete! 3D porotypes yakanaka pakusarudza chigadzirwa chigadzirwa, kutsanangura chirevo, kana kufadza mutyairi.
Sheet simbi yakasimba, inoumbika, uye inozivikanwa kwazvo. Sheet simbi inopesana neese ngura uye kupisa. Akawanda esimbi anosanganisira tini, simbi isina chinhu, nickel, mhangura, uye aluminium inogona kushandiswa mune jira simbi yekugadzira. Sheet simbi inobvumidza iyo dhizaini uye kugadzirwa kwemhando dzakaomarara uye dhizaini, ichiisa zvikamu zvakagadzirwa nesheet simbi mumaindasitiri epamberi epasirese.
Gadzira zviuru zvakafanana uye zvakaoma epurasitiki zvikamu nekukurumidza nemapurasitiki jekiseni kuumbwa masevhisi naJu Xin Wright. Zvikamu zvakagadzirwa nepurasitiki zvine makemikari, zvipenyu, uye kusagadzikana kwezvakatipoteredza zvichiita kuti zvive zvinobatsira pane yakakura nguva yeindasitiri. Plastiki jekiseni kuumbwa inoshanda nemapurasitiki mazhinji akasiyana, imwe neimwe inogona kupedzwa mhedzisiro dzakasiyana mumba. Tinokwanisa kugadzira maturusi akaomarara ealuminium mumazuva mashoma se5-7. Maturusi ekugadzira anogona kugadzirwa mumasvondo maviri nemaviri uchishandisa P20 simbi.
Kufa uchikanda mafomu esimbi zvigadzirwa mumhando dzakagadzirwa kune ako maratidziro. Kufa kunoitwa munzvimbo yedu yeCCC, yobva yashandiswa kugadzira zvakafanana masimbi esimbi. Makanda anotonhorera uye kuongororwa, uye mazhinji ekupedzisa masevhisi anogona kunyorerwa kushandiswa uye zvekushongedza zvinangwa. Tinogona kuburitsa Die Casted zvishandiso mumavhiki 2-4 chete tichishandisa H13 simbi. Isu tinopawo: Kuvheneka Kwayedza, Kuisirwa, Anodizing, Kupfeka Poda, Kuisa, yechipiri machining, uye kuchenesa.
Silicone Rubber richigadzirisa
Zvinhu zvakagadzirwa uchishandisa silicone rabha zvinopesana neora, makemikari, hazvibatwe nemagetsi, uye zvinogara munguva dzakanyanya. Muchokwadi, Liquid Silicone Rubber (LSR) iri mune yakanyanya kudiwa nekuti inoshandisa mune angangoita ese maindasitiri pasirese. LSR inowanikwa mumarudzi mazhinji, inogona kushandiswa mu 3D kudhinda, uye inogona kushandiswa mujekiseni kuumba kugadzira zviuru zvemayuniti.
Tine imba-yekupedzisa dhipatimendi inokwanisa kuisa inoshamisa nhamba yekupfeka uye inopedzisa kune ako akapera mapurojekiti. Kupedzisa masevhisi anopa kuwedzera kuoneka uye kusimba kwe prototypes, diki-batch kugadzira, uye yakaderera-vhoriyamu kugadzirwa. Kune chaiwo mavara anoenderana, isu tinoshandisa iyo Pantone color inoenderana system yekunyanyisa kunyatso uye isina musono yekubatanidza.
Kero:Kwete. 20, Zhipu mugwagwa, Qiandeng Town, Kunshan Guta, China